Isifundo.ly: Uhlelo Lokufundisa Nokufunda | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 13, i-2013 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 13, i-2013 Douglas Karr
Kunezikhathi, ikakhulukazi kubuchwepheshe, lapho ufuna ukunikeza isifundo esisheshayo nesilula seplatifomu yakho. Njengesibonelo, sikhule I-CircuPress njengohlelo lokusebenza lwe-imeyili oluzisebenzelayo lweWordPress… kepha ludinga izinyathelo ezimbalwa ukusetha. Singakwazi ukwenza ividiyo ekhombisa ukusetha, kepha umsebenzisi kuzodingeka ukuthi amise isikhashana / aqhubeke njengoba ebuka futhi elungisa i-akhawunti yakhe. Esikhundleni salokho, simane sisetha i- Izisekelo ze-CircuPress isifundo nge Kancane - kuhlanganiswe nemibuzo - ukuqinisekisa ukuthi bahamba ngonyawo lwesokudla!
Lapho usuqede isifundo sakho nemibuzo, unikezwa ikhadi elihle lombiko elilula:
Kancane yasungulwa ngumngane wethu omuhle, UMax Yoder, usomabhizinisi wendawo, umculi, umdwebi wevidiyo… kanye nomuntu omuhle ozungezile.
Kancane ivumela abasebenzisi bayo ukuthi bakhe izifundo ezinhle, ezinamakhasi ngemizuzu ngaphandle kolayini owodwa wekhodi. Ungakwazi ukwabela ababambiqhaza bakho izifundo noma wabelane ngezifundo zakho ngesixhumanisi. Isifundo.ly sizophatha izikhumbuzi ukuqinisekisa ukuthi izabelo zakho ziqediwe ngesikhathi. Izici ze- Kancane zihlanganisa:
izabelo - Nika izifundo ngasese noma usabalalise isixhumanisi somphakathi, ubona ukuthi ngubani othathe isifundo sakho nokuthi nini.
Amaqembu - Ungabela umuntu oyedwa noma dala amaqembu ngaphakathi kweSifundo ukwabela nokuphatha ababambiqhaza bakho.
kwakha - Bona ukuthi ngamunye wabasebenzisi bakho ukufunde kahle kanjani okubalulekile emibuzweni eminingi yemibuzo ongayikhetha.
Ukuxhaswa Kwezithombe Nevidiyo - Faka kalula izithombe noma ividiyo ezifundweni zakho.
Ukuhlaziya nokubika - Kancane igcina amarekhodi wokuqeqeshwa kwababambiqhaza bakho nomlando wezemfundo - kusukela ekuphenduleni kwabo imibuzo ethile kuye ngqo ukuthi yiluphi usuku nesikhathi abaqede ngalo ukuqeqeshwa okuyimpoqo nokuzikhethela.
Compliance - Kancane ilandelela amakheli we-IP wokuhambisana nomthetho.
Tags: yokufundauhlelo lokusebenza lokufundauhlelo lokusebenza lwesifundongokufundaizifundoImibuzookufundisauhlelo lokusebenza lokufundisa
I-Distimo: I-App Analytics, Ukuguqulwa nokulandelwa kwesitolo sohlelo lokusebenza